Wayeyisazi American, omunye bezithombe eziyishumi kakhulu ikhokhwe emhlabeni, sekuyisikhathi eside ngifuna onobuhle umsebenzi wakhe. Ibizwa ngokuthi yesimanje Salvador Dali kwesitayela kuyindida futhi umbono ngokuphelele entsha ngokoqobo.
Ukujwayeleka, wavula umnyango ukukhombisa ibhizinisi
Devid Lashapel - nombhali ihlazo futhi inkanuko izithombe - wazalwa ngo-1963 e-United States. Ngomdlandla wahlanganyela kusukela ebuntwaneni ubuciko, entsheni eqhubeka nezifundo zakhe e-the studios nezikole, ukuthuthukisa ukucabanga lakhe kwezobuciko.
Akekho owaziyo ukuthi kwakuyoba nomsebenzi indoda abanamakhono abasha esikhathini esizayo, kodwa ujwayele umculi emangalisayo futhi umdali pop art Andy Warhol, ahlinzekwa ithalente abasha ukusebenza iphephabhuku yakhe, lushintshe indlela yakhe komkhuba ukuphila. Yiqiniso, zonke izivalo bohemian art emhlabeni wonke LaChapelle, isibusiso umuntu obunjalo benkolo, avuleka.
David Eccentric kodwa employable kakhulu ozuza ngokuhamba kwesikhathi ube nedumela lokuthi ubuhlakani eliyingqayizivele, futhi unikele ukusebenza nabo abaningi izinkanyezi show ibhizinisi zicatshangelwe udumo.
Indida nokuntula inhlonipho
photographer professional, shagnuvshy lula kangaka emhlabeni bubuhle egcwele isicwebezelisi vice akusho makehle noma iyipi imidya umuntu ezaziwayo. Engazizwa iyiphi ukwesabe osaziwayo, sibanikeze izinto njengoba nje wokuthwebula yakhe.
Ukusebenza in isitayela surrealism, Lachapelle nangokubhuqa futhi sidala ngokoqobo yinqaba nge sici zako ezisemqoka - i ukujula emangalisayo ekhululekile futhi kuqhume imibala. Iphalethi Bright imibala njalo kubangela nemizwelo eminingi ebuhlungu, elifuna Devid Lashapel.
Isitayela engavamile umsebenzi
isitayela lakhe ngempela liyabonakala: ngaphezu Inkulumo umbala, lisebenzisa izindlela ezikhethekile ukuba ziphathe bonke abantu bethwebula izinhlamvu njengoba nabangenaluthando, kodwa onodoli enhle ngokuphelele.
Toy izithombe izinkanyezi edume kakhulu pop isiko ngokuvamile akukhona ukumane zocansi, futhi cishe zibukeka on the esengozini kusetshenziswa isakhamuzi abavamile, ababengenawo amandla okugqashula kude kulungiselelwa ewubuciko - ifilimu elincane uzimele. Hhayi ize kwafunwa amakhosi nge amazing ukunambitheka yobuhle is kufanele ngokuthi i- "Fellini wokuthwebula emhlabeni."
Imagination obusingethwe ngokoqobo
Ngokwezimakethe photographer professional yimpumelelo ukuhumusha ibe yinto engokoqobo fantasy yasekuqaleni kakhulu futhi inkanuko. UDavide, unganqikazi ukusebenza izithombe izifundo zenkolo, ezibonakala okubangela umbukeli. Ukuphendula ukhononda ngalowo nobuxhwanguxhwangu yinhlekisa esingcwele kakhulu, uthi lena umbono wakhe ngokuphila.
Ukubuka yokuqala emhlabeni - ikhadi ngokuvakashela photographer ukumenyelwa ukudubula ukukhangisa imikhankaso brand ethandwa kakhulu futhi elikhanyayo ikhava CD ka izinkanyezi emhlabeni.
Lutho neze ngokoqobo endaweni yesehlakalo, ethatha ikhamera ezivamile digital. "Izinga lens awukwazi kuthinte ukubaluleka yobuhle we Uhlaka," - uthi Devid Lashapel, ukuthi imisebenzi kabani uthandeka futhi engavamile. esihluke wakhe ongavamile okwakhe futhi kunzima ukuliqonda for umbukeli ongaqeqeshiwe.
emhlabeni Mad, uzwakalise ngokusebenzisa iphrizimu lens ikhamera
UDavide akangabazi ukuthi uNkulunkulu uhlala ngenkathi ekhulwini uyahlanya, futhi ugcizelela ke kuzo zonke izindlela kunokwenzeka. izitayela Eclectic, pretentiousness, elibi, avuse futhi kuyinselele umphakathi, Asingabazi izihloko, okuyinto akusho ngokuzwakalayo - main isitayela umthwebuli wezithombe, ungazami ukuhlukanisa emkhatsini wendzaba empilweni yangempela lapho ethanda izwe esiphendula esibhekisa phansi.
Zingagwegwesi, akusiyo yonke inkanyezi ngubani amaphupho indalo ngokuhlanganyela, uhlala aneliseke lokhu kubambisana. Akuwona wonke umuntu afanele amahlaya self-Ukwehlisa ukweyisa endleleni yakhe futhi ngiyayithanda.
A round esisha lokusungula
Kodwa ungabali LaChapelle aqukethe kuphela izithombe lomqondo, kamuva wazama isandla sakhe njengoba umqondisi izimakethe futhi umdali ekhululekile isiqophi usebenzela ethandwa show abadlali. iminyaka engu-11 edlule, ngisho umklomelo for ifilimu documentary ngokuzalwa entsha isitayela kanzima umdanso - Krampe.
Ngo-2006, uthola isinqumo ezingalindelekile ukushiya konke show ibhizinisi. Njengoba ixazululwe esiqhingini saseHawaii, Devid Lashapel ukhathazeke kuphela zobuciko, ukugxila izithombe kwezobuciko. Ukuvama reclusive kakhulu, kwakuqabukela unika izingxoxo, kodwa nemibukiso njalo egujwa emhlabeni wonke.
Indida lenani kwamakhasimende
Ekuphetheni, singasho ukuthi Devid Lashapel, obhekwa ukuphila Troubadour okunethezeka ethabelo imisebenzi yakhe ome njengeqanda wangabaza amagugu umthengi, drummed ezingqondweni umqondo umFilisti ukuthi ngamunye ukuthenga okusha yendlu iyakufika injabulo. Ngokweqiniso ekuboniseni underside ubuhlanya yesimanje, wakwenza kangcono kunanoma iyiphi indaba zomlando.
Contemporary art kinetic: incazelo, izici abamele. art Kinetic engxenyeni kwekhulu lamashumi amabili wesibili
Izmailovo Vernissage: yini ukubona, kanjani lapho kanye namahora okuvula
Idolobhana Zatoka (Odessa esifundeni): ukuzilibazisa izikhungo, abezimboni ezizimele, ibalazwe, izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
I-IP 6: Amandla ebhetri. Izintengo zebhethri ze-iPhone 6